विभिन्न मोडेलका ईकोस्पोर्ट नेपाली बजारमा, यस्ता छन् मूल्य – BikashNews
विभिन्न मोडेलका ईकोस्पोर्ट नेपाली बजारमा, यस्ता छन् मूल्य
२०७६ फागुन २२ गते १४:०३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता जीओ अटोमोबाइल्सले फोर्ड इकोस्पोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । भारत स्टेज भिआइमा आधारित इकोस्पोर्ट पुरानो २०१९ को मूल्यमा नै निरन्तरता दिइ बजारमा ल्याएको हो ।
यस अनुसार २०२० फोर्ड ईकास्पोर्टको पेट्रोल गाडीको मुल्य रु. ३८.९९ लाखबाट र डिजेल गाडीको रु. ३९.९९ लाखबाट शुरु हुनेछ । यसबाट ग्राहकले नयाँ मुल्य निर्धारण हुनुभन्दा पहिला बुकिङ्ग गरी फाइदा उठाउन सक्ने छन् ।
२०२० मा सार्वजनिक यो गाडी ड्राइभिङ्गको लागि रमाइलो, शक्तिशाली र पेट्रोल डिजेल इन्जिनको लागि विशिष्ट रोजाइ रहेको कम्पनीको दाबी छ । ईकोस्पोर्ट डिजेलमा फोर्डको विश्वस्त र भरपर्दो बिएसभिआइमा आधारित १.५लि टिडीसिआइ डिजल इन्जिन रहेको छ । जसले १००पिएस पावर र २१५एनएम टर्की के प्रदान गर्दछ र यो म्यानुअल ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छ ।
लाइन अपमा फोर्डको नयाँ ३ सिलिन्डरयुक्त १.५लि टिआइ भिसिटी पेट्रोल इन्जिन समावेश छ । जसले १२२पिएस पावर र १४९एनएम टर्की प्रदान गर्दछ । पेट्रोल इन्जिन पाँच स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन र ६ स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छ ।
२०२० संस्करण इकोस्पोर्ट ३ वर्ष वा १ लाख किमिको वारेन्टीका साथ आउने यी गाडीहरुको सेग्मेन्टमा सबैभन्दा कम स्वामित्व खर्च रहेको छ । यस संस्करणमा पनि ईकोस्पोर्टले आकर्षक वाहिरी बनावट, आरादायी भित्री बनावट तथा स्टाइललाई कायम राखेको छ ।
साथै, यो सनरुफजडित भेरियन्टमा पनि उपलब्ध छ । ईकोस्पोर्टमा ग्राहकहरुका लागि अतुलनीय सुरक्षा, आरामदायी सवारीका साथै हरेकपल कनेक्टेड रहन उच्चतम प्रविधिहरु जडान गरिएको छ । मूल्य सूची
सुनको मूल्य बढ्दो क्रममा, प्रतितोला ९२ हजार ८ सयमा कारोबार
सुनकाे मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, प्रतिताेला ९३ हजार ३ सयमा काराेबार
वर्षायाम सुरु भएसँगै एलजीको वासर ड्रायरको माग बढ्यो
गुगल सटिफाईड एन्ड्रोईड टिभी अब सिजी ब्राण्डमा